Deeqo Jibriil oo u sharaxan Golaha Magaalada Boston |
Deeqo Jibriil oo u sharaxan Golaha Magaalada Boston
Jagadan badanaa ay dadku iskaga isticmaalaan luqada Ingiriiska ‘CITY COUNCILOR’ waa jago muhim ah marka loo eego xaga awood qaybsiga wadankan Maraykanka. Golaha Magaaladu waa awooda dajisa dhamaan isticmaalka dhaqaalaha magaaladaa, iyada oo kooban waa dadka gacanta ku haya mustaqbalka caruurtaada, saxada hoygaaga, amaanka naftaada, iyo dhamaan jawiga dariskaaga.
Hadaba magaalada Boston oo ah magaalada wadankan maraykanka xadaaradiisu kasoo unkatay walina ka unkantahay ayaa waxaa maanta jagada ugu saraysa ee magaaladan laga qabto marka laga reebo duqa magaalada waa inaad ka mid noqotid oo aad cod ku yeelatid golaha deegaanka.
Soomaalida reer Boston ayaa maanta nasiib u helay inay soo baxdo gabadh haysata sumcad ay ku kasban karto dadka ay xaafada ladagan tahay iyo xaalada wadanka oo haatan siyaasadu ku yara kacsan tahay dadka laga tirada badan yahay siiba dadyowga soo galootiga ah.
Deeqo Jibriil ayaa hada ugu cad cad dadka iska sharaxay sanadkan ‘District 7’ xaafad waxeedka todobaad, hadaba dhamaan Soomaalida degan Xaafadan waa in aad wiigan saxeexdaan ka raali ahaanshihiina inay Deeqo tartanto iyo taageeridiinana si aad uu muujisaana aad isugu soo baxdaan March 28, 2017. Hiypernian Hall (Dab Damika Dudley) ka oo ay Deeqo si cad ugu dhawaaqi doonto inay u taagan tahay musharax nimada jagadan.
Soomaalida inteena aan daganayn xaafadana kasoo wada qaybgala xafladaa oo madax tirsi ah…..dhamaanteena aan deeqo ku garab istaagno dhaqaale waayo dhaqaale la’aan waxba nooma suuro galayaan inaga iyo Deeqaba… Booqo
Oo ku deeq dhaqaale waayo waa la’eegayaa inay tageero haysato iyo in kale, Mahadsanidiin,
Eng. Xuseen Fiin oo idin leh dad uunbaynu dooran jirnee maanta aynu is doorano…